झण्डै एक लाख विद्यार्थी ११ कक्षा पढ्न बञ्चित ! आखिर किन ?
- नेपाली सन्देश आइतवार, असार १०, २०७५ , 5.2K जनाले हेर्नुभयो
१० असार, काठमाडौं । २०७४ सालको एसईई परीक्षाको नतिजाअनुसार झण्डै एकलाख विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न बञ्चित हुने भएका छन् । यो नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि माथि नउठेको पुष्टि हुने शिक्षाविदहरु बताउँछन् ।
यो किसिमको स्थितिलाई हेर्दा कल्चरलाई कसरी मिलाएर जाने भन्ने कुरा मुख्य चुनौतीको रुपमा आएको छ । अहिले वस्तु बदलेर केही अर्थ छैन । कम्पेरेटिभ कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो लागि ठूलो कुरा भएको छ । किनभने कल्चर जिम्मेवारी नलिने, रहर जिम्मेवार लिनुपर्छ भन्ने, त्यसलाई मिलाउनै नसकिएको देखियो ।